ZAIKABEM-PIRENEN’NY SENDIKAN’NY MPAMPIANATRA - Nanome toky ireo nivoaka tao amin’ny INFP fa foana hatreo ny fitokonana - Ministère de l'Education Nationale
ZAIKABEM-PIRENEN’NY SENDIKAN’NY MPAMPIANATRA – Nanome toky ireo nivoaka tao amin’ny INFP fa foana hatreo ny fitokonana
Nifarana androany Zoma 21 Aogositra 2015 rehefa naharitra roa andro ny zaikabem-pirenen’ny sendikan’ny mpampianatra nivoaka tao amin’ny INFP manerana ny Nosy na ny SSIM, izay natao tetsy Mahamasina. Nanana solontena nandray anjara avokoa ny avy any amin’ny faritra 22 eto amintsika. Fandinihana ny fiaim-piainana manokana anatiny no anisan’ny nisongadina tamin’izany. Taorian’ny zaikabe dia nisy ny fehinkevitra nivoaka izay nahitana teboka valo. Tafiditra ao anatin’izany ny lohahevitra voalohany ny momba ny fangatahana ny ampiakarana ho catégorie IV ho an’ireo mpampianatra nivoaka tao amin’ny INFP, EN II (EC, ESS, EM) alohan’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2016, mangataka ihany koa izy ireo ny hanafoanana ny « contract » fa mba ho « stagiaire » avy hatrany ny INFP.
Fangatahana ny hampiharana ny rafitra LMD eto amin’ny rafitra pedagojika. Eo ihany koa ny momba ny fitaovana ampiasaina. Hangatahan’izy ireo ny hahazoana fitaovana manaraka ny teknolojia toy ny solosaina, tablette. Momba ny famindran-toerana dia angatahan’izy ireo ihany koa ny mba hifanaraka amin’ny cisco misy azy ireo izany. Mahakasika ny « prise de service » dia hangatahan’izy ireo ny handoavana ny karama telo volana izay nanomezana « note de service ». Ary farany dia ny fangatahana ny hanomezana sata manokana ho an’ny mpampianatra. Nanome toky ireo sendikan’ny mpampianatra nivoaka tao amin’ny INFP ireto fa foana hatreo ny fitokonana ary vonona hiara-hiasa amin’ny minisitera izy ireo.
Ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny fanabeazana fototra sy fampianarana mamaky teny sy manoratra Dr Andriamampandry Todisoa kosa raha nandray fitenenana dia namaly avy hatrany isaky ny teboka ireo fehinkevitra nivoaka nandritra ity zaikabem-pirenen’ny sendikan’ny mpampianatra nivoaka tao amin’ny INFP ity. Momba ny teboka voalohany fampiakarana ho categorie IV dia efa misy kaomisiona mandinika izany hoy izy ka alohan’ny faran’ny taona dia hivaly ny « reclassement ».
Momba ny fanafoanana ny fifanarahana dia nambarany fa mahazo milamina ianareo eto amin’ny INFP fa tsy voakasika amin’izany. Ny rafitra LMD hoy izy dia ny minisiteran’ny fampianarana ambony no manao izany ka tsy maintsy misy ny firesahantsika amin’izy ireo. Ka hodinihana izany. Ny lafiny fampitaovana dia efa nanome ny mpamantsy vola hoy ny tale jeneralin’ny fanabeazam-pirenena, solosaina tany amin’ny cisco ka afaka miara miasa amin’izy ireny, kanefa tsy misakana ny INFP tsy hijery mpiaramiombon’antoka izany. Momba ny lafiny famindran-toerana dia nambarany fa raha misy porofo mazava tsara mikasika ny fangatahana famindran-toerana dia alefaso fa hodinihana izany.Tsy maintsy mandresy lahatra ny minisiteran’ny asam-panjakana, ny minisiteran’ny tetibola isika amin’ny fanatanterahana ireo ka sahiko ny milaza hoy izy fa tsy maintsy hivaly ireo fangatahanareo ireo. Miarahaba anareo hoy ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny fanabeazana fototra sy fampianarana mamaky teny sy manoratra Dr Todisoa Andriamampandry fa nahatanteraka ity kongresy nasionaly ity na dia be aza ny tsaho fa hitokona ny sendikan’ny INFP. Nomarihiny ihany koa fa tsy misy resaka politika ao anatin’ny fanabeazam-pirenena fa vokatra teknika no tadiviana amintsika mpampianatra.